Google docs: sida dukumiintiyada Google u shaqeeyaan | Abuurista khadka tooska ah
Google docs: sida dukumiintiyada Google u shaqeeyaan
Ku shaqeynta dukumiintiyada daruuraha maahan wax waalan maanta, liddi ku ah. Iyo kuwa badan oo beddelka ah ee aan haysanno, ee ah Dukumiintiyada Google ayaa ka mid ah kuwa ugu isticmaalka badan. Ma taqaan Google Docs?
Haddii aadan garanayn waxay tahay, ama aadan wali ku isticmaalin awooda ugu badan, markaa waxaan kaa caawinaynaa inaad sameyso oo aad soo ogaato mid ka mid ah aaladaha loo adeegsado, gaar ahaan haddii aad ka mid tahay kuwa safarka badan ama beddelo kombiyuutarada oo Had iyo jeer waxaa lagu dhejiyaa ulaha USB-ga, DVD-yada, CD-yada iyo darawalada dibadda
1 Waa maxay waraaqaha Google, dukumiintiyada Google
2 Maxay dukumintiyada Google aniga iigu shaqeeyaan?
3 Sida loo adeegsado Google Docs
4 Oo maku soo dhoofsan kartaa dukumiintiyada ama kaliya ma abuuri kartaa kuwa halkaas lagu sameeyo?
5 Sida dukumenti loola wadaago Google Docs
Waa maxay waraaqaha Google, dukumiintiyada Google
Google Docs, sidoo kale loo yaqaan Google Docs dhab ahaantii waa iskutallaab; qalab ay kaa siinayaan Google oo looga isticmaali karo kombiyuutarkaaga, kaniiniga, taleefankaaga casriga ah ... Waxaa loogu talagalay inaadan u baahnayn inaad dukumiinti fara badan ku qaadatid qalabka qalinka lagu qaato, darawallada dibadda iyo wixii la mid ah , laakiin halkii ayuu ku sii jiri doonaa daruuraha. Laakiin sidoo kale si fudud ayaa loo soo dejisan karaa.
Qalabkani wuxuu si buuxda ula jaan qaadayaa noocyada faylasha ee kala duwan, hadey yihiin dukumiinti qoraal ah, iskeysiyo, xaashiyaha ... Runtii, barnaamijyada aad adeegsan doontid waa "clones" ka xafiiska xafiiska. Iyo tan ugu fiican, waa lacag la'aan. Sidaa darteed, waxaad ku heli doontaa Excel, Erey, PowerPoint nooc bilaash ah (oo waxaad awoodi doontaa inaad ku furto barnaamijyadan dukumiintiyada aad la sameysay kuwa kale (iyo qaabab kale oo badan).
Maxay dukumintiyada Google aniga iigu shaqeeyaan?
Ka soo qaad in aad safar ganacsi aadayso. Waa macquul inaad qaadato dhamaan dukumiintiyada aad ubaahantahay, laakiin kawaran hadaad hal iloowdo oo aad weydo cid kuu soo dirta? Markaa dhibaato ayaad la kulmi doontaa. Dhinaca kale, haysashada dukumintiyada ee daruuraha waxaad ogtahay, ha ahaato taleefanka gacanta, kaniiniga ama kombuyuutarkaaga, inaad awood u yeelan doonto inaad marin ka hesho, kala soo baxdo, ku daabacan karto, iwm. dhib la’aan.
Kaliya intaas maahan, laakiin sidoo kale Dukumiintiyada Google waxay leeyihiin faa iido aadan ka heli karin kuwa kale: midka ay dhowr qof isla waqtigaas isbeddel ku sameyn karaan waqtiga dhabta ah, si ay u noqoto aalad ku habboon kooxaha ama kooxaha shaqada.
Tan tan waa inaan ku darno inay leedahay labadaba faallooyin (ku darid iyo akhrin) iyo sheekaysiga, la hadalka qofkaas iyadoon loo baahnayn taleefan ama sheeko kale oo ka baxsan aaladda (sidaas darteed wax walba hal meel bay isugu urursan yihiin).
Isla sidaas oo kale ayey ku dhacdaa tafatirka, halka aad ka heli doontid ikhtiyaarka aad wax ku beddeli karto, laakiin sidoo kale inaad soo jeediso, iskudayso shaqada xakamaynta isbeddelada ku jira Ereyga, si aad u aragto isbeddelada iyo ikhtiyaarka inaad ku oggolaato ama tirtirto, ka hor qayb ka mid ah dukumintigaas ugu dambeeya.
Hadana haddii aad ka fikirayso in adeegsiga dukumiintiyada Google ay noqonayso mid aad u dhib badan maxaa yeelay waa inaad ku tiirsanaataa internetka, ogow inaysan ahayn. Waxaa loo isticmaali karaa xitaa internetka la'aan maxaa yeelay waxaad u baahan doontaa oo keliya inaad ku darto kordhinta Chrome-ka dukumintiyada Google ee khadka ka baxsan iyo awood u siinta ikhtiyaarka qad la'aanta ee Google Docs, goobaha. Marka uma baahnid Internet, oo waxay noqon doontaa goor dambe oo dhammaantood la soo dhejiyo adigoon wax walwal ah ka qabin.
Sida loo adeegsado Google Docs
Haddii kuwa aad aragtay ka dib, aad xiisaynayso Google Docs, waa inaad ogaataa in waxa kaliya ee aad u baahan tahay ay tahay inaad lahaato koonto Google ah oo aad ku isticmaasho qalabkan. Markaad gasho emaylkaaga, ama xitaa bogga hoyga Google, waxay ku siin doontaa ikhtiyaarka aad ku gasho. Hadaad sameysid, waxaad arki doontaa inay dhigeyso astaan ​​uu kujiro sawirka gmailkaaga.
Marka xigta, waa inaad garaacdaa laba jibbaaran sagaal dhibcood oo aad ku leedahay shaashadda dusheeda. Taasi waa meesha waxaad ka heli doontaa dhowr codsi oo Google ah, iyo halka ay ku jiri doonto Dukumiintiyada Google. Kaliya waa inaad gujisaa "Dukumiintiyada" waana intaas.
Ka taxaddar, haddii aadan heli karin, dhagsii badhanka "More from Google" oo qalabka oo dhan waa la taxi doonaa, in kasta oo ay caadi tahay inay ka dhex muuqato kuwa ugu horreeya maxaa yeelay si ballaadhan ayaa loo adeegsadaa.
Markaad gasho, waxaad yeelan doontaa safka ugu horeeya kaas oo Bilow dukumiinti cusubi ka muuqan doono. Halkaas waxay ku siin doonaan qaar ka mid ah tusaalooyinka sida Dib u soo celinta, waraaqaha, soo jeedinta mashruuca, buug-yaraha, warbixinnada ... Laakiin sidoo kale suurtagalnimada abuuritaanka dukumiinti maran.
Haddii aad eegto Gallery-ka Template, markii aad gujiso, waxaad marin u heli doontaa menu-ga gaarka ah ee sheyladaha jira, haddii aad u baahatid.
Haddii aad siiso baararka jiifka ah (geeska bidix ee kore, ka hor astaanta iyo erayga Dukumiinti), waxaad arki doontaa in noocyada dukumiintiyada ee aad furi karto ay kala duwan yihiin: Dukumentiyo (erey, qoraal), xaashiyo, bandhigyo iyo foomam.
Oo maku soo dhoofsan kartaa dukumiintiyada ama kaliya ma abuuri kartaa kuwa halkaas lagu sameeyo?
Haddii aad horeyba dukumiinti u sameysay oo aad ugu baahan tahay qalabkan, ogow inaadan dhibaato ku qabin sameynta iyaga. Kaliya waa inaad soo dhoofsataa. Sidee? Waxaan kuu sharaxeynaa talaabooyinka:
Fiiri shaashaddaada. Meel ku calaamadee calaamadda "plus" ee geeska midig ee hoose. Waa macquul in, shaashadda, aysan soo muuqan doonin, marka xeelad waa in jiirka kor iyo hoos loogu dhaqaajiyo giraangirta si shaashadda u beddesho ka dibna ay u muuqato. Markaad riixdo, waxay kuu ogolaaneysaa inaad dukumintiga aad rabto ka soo rarto kumbuyuutarkaaga, pendrive, disk-ka dibadda ... daqiiqado gudahood waad awoodi doontaa inaad la shaqeyso.
Hadana haddii aad ka walaacsan tahay qaabka, xaaladaha badankood wax dhibaato ah kuma yeelan doontid, waxay la mid noqon doontaa sidii aad ku abuurtay meel ka baxsan qalabka; waxa kaliya ee isbadali kara waa font, laakiin qaabka laftiisa waa in lagu hayaa.
Sida dukumenti loola wadaago Google Docs
Kahor intaanan sharaxin mid ka mid ah Faa'iidooyinka ay leedahay Google Docs ayaa ah awoodda ay iskaga kaashan karaan dhowr dukumiintiga. Laakiin, in sidaa la yeelo, marka hore waa lagama maarmaan in lala wadaago. Haa, way la fududdahay sida shaqooyinka kale.
Si tan loo sameeyo, waa inaad gujisaa badhanka midigta ku yaal (jiirka oo ku yaal dukumintiga Google) oo guji si aad ula wadaagto. Waxaad heli doontaa shaashad yar oo ay ku qoran tahay "La wadaag dadka kale". Halkan waxaad ku haysataa laba ikhtiyaar:
Hel xiriiriyaha si aad ula wadaagto dukumiintiga.
Ku dar dadka si ay u sameeyaan. Si tan loo sameeyo, waxaa ugu wanaagsan in la isticmaalo emayllada (laakiin maskaxda ku hay inay tahay inay ka yimaadaan Google).
Xaalada ku darista dadka, waxay kuu ogolaaneysaa inaad siiso iyaga fursad ay wax ku saxaan, inay faallo ka bixiyaan ama ay wax uun u arkaan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » dhowr » Google docs: sida dukumiintiyada Google u shaqeeyaan